Giriiga: Wiil Soomaali oo lagu xukumay 146 sano oo Xabsi ah | KEYDMEDIA ONLINE
Giriiga: Wiil Soomaali oo lagu xukumay 146 sano oo Xabsi ah
Muhaajiriin Soomaaliyeed oo magan-gelyo doon ah ayaa lagu xiray waddanka Giriiga, iyadoo mid kamida raggaasi lagu eedeeyay inuu tahriibinayay dhallinyarada kale, waxaana lagu xukumay 146 sano oo xabsi ah.
Athens, Greece - Muwaadin Soomaaliyeed oo magangalyo doon ah ayaa lagu xukumay 146 sano oo xarig ah, iyadoo loo haysto fal dambiyeed ah tahriibinta dadka, maxkamad ku taal Griiga ayaana fulisay xukunkaasi sida ay sheegeen Golaha Yurub ee Qaxootiga iyo Maxaabiista.
Maalintii Khamiista, May 13 -keedi Maxamed H. waxaa lagu xukumay 146 sano oo xarig ah maxkamad ku taal waddanka Griiga gaar ahaan jasiiradda Lesbos. Muwaadinkan soomaaliga ah ee 27 sano jirka ah ayaa waxaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta tahriibin muhaajiriin kuwaasoo ka yimid dalka Turkiga una socday Griiga.
Golaha Yurub ee Qaxootiga iyo Masaafuriska (ECRE) ayaa ku sheegay xukunka warbixintooda toddobaadlaha oo ay kusoo daabaceen barta ay ku leeyihiin Twitter -ka.
Hay'adda ECRE ayaa warbixinteeda ku sheegtay in Maxamed H, oo ah aabe da ’yar oo afar caruur ah leh uu ka soo qaxay Soomaaliya oo uu aaday dalka Turkiga. Wuxuu ka mid ahaa 34 qof oo doon ka caag ka raacay Turkiga kuna sii jeeday Giriiga bishii Diseembar 2020. Waxaana loo haystaa inuu yahay tahriibiyaha dadka, inkastoo la sheegay inuu isku dayay inuu badbaadiyo dadkii kale ee magan-gelyo doonka ahaa maadaama ay burburtay doontii ay saarnaayeen.
Sida laga soo xigtay Golaha Yurub ee Qaxootiga iyo Maxaabiista ECRE, doonta ay la socdeen ayaa ku degtay meel u dhow jasiiradda Lesbos iyadoo laba qof oo rakaab ah oo saarnaa doonta ay ku dhinteen. Kuwa kale waxaa soo qabtay ilaalada xeebaha Griiga, oo uu kujiro Maxamed H.
Waqtiga ilaalada xeebta imanayeen, Maxamed H. ayaa la sheegay inuu waday markabka. Sababtaas awgeed, waxay mas'uuliyiinta Giriigga ku soo oogeen dacwo ah "Gaadiid sharci-darro ah oo muwaadiniin u dhashay waddan saddexaad oo u socdaalay dhulka Giriigga." & tahriibinta dadka.
Waxaa sidoo kale lagu soo oogay inuu khatar geliyey nolosha dadka kale iyo inuu sababay dhimashada laba qof, sida lagu xusay warbixinta ay qortay ECRE.